चिनियाँ कम्युनिज्मको सय वर्षः के यस्को एकमात्र उद्देश्य इसाई ध्वस्त पार्ने हो? « रिपोर्टर्स नेपाल
चिनियाँ कम्युनिज्मको सय वर्षः के यस्को एकमात्र उद्देश्य इसाई ध्वस्त पार्ने हो?
डा. डेभिड ल्यान्ड्रम: ‘यस हप्ता, चीनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पाटीको १०० वर्ष मनायो । तर, गगनचुम्बी वस्तु र उपभोक्ता सामानहरूको कारण मूर्ख नहुनुहोस् । एक सय बर्षपछि, चीन अझै पनि घनिष्ट तरिकाले कम्युनिष्ट राष्ट्र बन्छ । त्यहाँका नेताहरूले अझै पनि आफ्नो विचारधारामा झुक्न इन्कार गर्ने ईसाईहरुलाई घृणा गर्छन् ।’
उन्मत्त पूर्वी जर्मनहरूले बर्लिन पर्खालको भग्नावशेषहरूमा नाँचिरहेका दृश्यहरू विश्वभरि फैलिएपछि यो लेख साम्यवादको लागि भित्तामा रहेको जस्तो देखिन्थ्यो । एकपछि अर्को राष्ट्रमा एक दलीय समाजवादी सरकारहरू पतन भइरहेका थिए । रुसले समेत कम्युनिष्ट नीतिलाई खुला रुपमा स्वीकर गर्दै गयो । लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले यसलाई “इतिहासको अन्त्य“ भनेर घोषणा गरे । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, उदारवादी लोकतन्त्र भनेको अन्तिम विचारधारा हो र अब देखि कुनै पनि राष्ट्र चलाउने एक मात्र मार्ग, उही हो ।
त्यो वर्र्ष सन् १९८९ मा टियानानमेन स्क्वायरका विद्यार्थीहरुले प्रजातन्त्रको लागि प्रदर्शन गरे जहाँ स्वतन्त्र बोली, स्वतन्त्र प्रेसका लागि आव्हान गरियो । यद्यपि, त्यो सरकारविरुद्वको प्रदर्शन फरक ढंगले टुंगियो । यसलाई चिनियाँ अधिकारिहरुले विरलै इतिहासको मान्यता दिए । यस्तो देखिन्थ्यो कि चिनियाँ कम्युनिज्म पोलिस, युगोस्लाभियन र अन्य सोभियत मोडल भन्दा फरक धारमा गइरहेको थियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सन् १९२१ मा स्थापित भएको थियो । सीसीपी एक निरन्तर आफ्नो नीतिमा अगाडि बढ्दै गयो । एक विशाल शक्तिको रुपमा स्थापित भयो । यसले निरन्तर आफ्नो शैली परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्दै शक्तिशाली भइरहेको छ ।
सत्ता कब्जा गर्न सीसीपीले ‘एक राष्ट्र – दुई प्रणाली’ को नीति अनुसरण गर्न थाल्यो जहाँ सामाजिक र राजनैतिक माक्र्सवाद, स्वतन्त्र बजार पूँजीवाद साथसाथै चल्थ्यो । यसलाई पश्चिमी निगमहरुले शोषण गर्न प्रयास गर्यो । तर, विफल हुँदै गयो । ब्रेजिट रोल आउट भयो, त्यसपश्चात चीन हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आयात बजार भयो । हामीले इलेक्ट्रिकल ग्याजेटहरु, कपडाहरु, स्वास्थ्यका लागि पीपीई र कोभिड परिक्षण किटहरुमा अर्बौ खर्च गर्ने गर्छौँ । मानिसहरु प्रायः चीनलाई कम्युनिष्ट राष्ट्रको नाममा चिन्ने गर्दछ ।
चीनको चमकदार गगनचुम्बी भवन र स्मार्टफोनहरुप्रति भ्रमित नहुनु होस् । यो देश एक सय वर्षपछि अझै धेरै अनिवार्य माक्र्सवाद राष्ट्र बन्छ । जुन देशले धार्मिक स्वतन्त्रताको ख्याल गर्छ उनीहरुलाई यो निकै चिन्ताको विषय हो । सीसीपीले उक्त देशको भावना र धार्मिक स्वतन्त्रतालाई कुल्चदै जाने छ । निसन्देह हामी अध्यक्ष माओको सांस्कृतिक क्रान्तिको दिनमा छैनौँ । त्यस बेला कम्तीमा ४५ करोडको मृत्यु भएको थियो । त्यस बेला थुप्रै चर्चहरुलाई बन्धनमा राखियो र त्यहाँ रहेको पादरीहरुलाई पनः शिक्षा दिइयो । यद्यपि धार्मिक स्वतन्त्रताको पूर्व निर्धारण गर्न वा अन्य प्रकारको स्वतन्त्रता कायम गर्न चीन धैरै गरिब छ । र, गरिब हुँदै गइरहेको छ ।
विश्वमा यस्ता ५० देश छन् जहाँ क्रिस्चियनहरु निकै सताइने र भेदभाव भोग्छन् । यसमा चीन यस वर्ष १७ औँ स्थानमा छ । यो एउटा झस्काउने प्रवृत्ति हो । यसले पार्टी र राष्ट्र गहिरो विरामी भएको संकेत गर्दछ । चीनले इसाई वा अन्य धर्मका मानिसहरुलाई सताउने कदम चालेको छ । नयाँ युगमा चीनले सताउनका लागि इसाई धर्माबलम्बीहरुको विना कागजी प्रक्रिया गरि चर्च ध्वस्त गर्ने, पादरीहरुलाई यातना दिइने गर्दछ । त्यसबाट निस्किएका मानिसहरुले जबरजस्ती सीसीपीको प्रशंसा गर्ने बनाउँथे । चिनियाँ राज्यहरुको विचारधारासँंग मिल्ने गरी बाइबललाई बनाइएको छ ।
४० वर्ष अघि चीनमा एक रातमा करोडौं बाइबल तस्करी गरिएको थियो । आज, धर्मशास्त्रको पहुँच चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ । बाइबलको उपलब्धतामा एउटा क्लापडाउन भएको छ, जबकि चीनमा अनलाइन बाइबल अनुप्रयोगहरू र क्रिश्चियन च्याट रूमहरू बन्द गरिएका छन् । टेक्नोलोजीलाई सीसीपीले हतियार बनाएको छ ।
इबरस्पेसले आफ्नै नागरिकहरूमाथि नियन्त्रणको नयाँ शैली बनेको छ । जुन डिजिटल उत्पीडनको युगको वर्णन गर्दैछ । यसले दमनकारी शासनहरूलाई निर्यात गर्दैछ ।
अनलाइन सेन्सरशिपको साथसाथै चर्चहरूलाई अनुहार पहिचान टेक्नोलोजी पनि राख्न जबरजस्ती गरिन्छ । ताकि राज्यले लग–इन गर्न सकोस् । मोबाइल फोन टेक्नोलोजीले प्रभावकारी ढंगले नागरिकहरूलाई ट्र्याक गर्दछ । यी सबै कुरा चीनको ’सामाजिक प्रणाली’ सँग एकीकृत गर्दछ । जसले शिक्षा, रोजगारी र आपराधिक न्याय प्रणाली जस्ता दैनिक क्रियाकलापहरूको असंख्य मसीहीहरूमाथि दमन गर्न सक्षम छ ।
चिनियाँ राज्यको पहिचानको रुपमा स्थापित भइरहेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीङपिङ सीसीपीको निती वा घरेलु नितीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति वा समूहहरुका लागि हालसालै विश्वभर चलिरहेको कोभिड–१९ ले प्रकाश पार्दछ । यस बीच चीनले आफ्नो ग्रेट पोलिटिक्स र मिडियालाई विस्तार गर्यो । इसाईको धर्मग्रन्थ बाइबललाई आफ्नो तरिकाले निर्माण गरेरे चीनले आफ्नै राष्ट्रमा अधिक क्रिस्टनको अखाडा बनाइसकेको छ । चीनमा करिब १० करोड क्रिस्टन विश्वास गर्ने मानिस रहेका छन् । त्यहाँ सीसीपीको सदस्य भन्दा बढी क्रिस्टेनको संख्या भएको छ । त्यहा ७ प्रतिशतले चर्चहरुको विस्तार भइरहेको छ । यो दूई दशकको अन्तरालमा चीन अत्याधिक क्रिस्टेनहरुको समूह भएको देश बनेको छ । चीन यस विषयलाई लिएर चिन्तित छ ।
सीसीपीले आफ्नो रक्तपातपूर्ण र क्रुर अस्तित्वको सय वर्ष मनायो । चीनको शाही शासनले सबै स्वतन्त्र समाजहरुको लागि स्पष्ट र वर्तमान खतराको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो चुनौतीको सामना गर्न महत्वपूर्ण राजनीतिक संकल्पको आवश्यक पर्दछ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले पुँजीवाद, राष्ट्रवाद लगायतका विचारधारा आफूमा समावेश गरेको छ । चीनमा बाइबलको तस्करी पश्चात त्यहाँ गृह युद्धको शुरुवात भयो ।
चीन भित्र यो प्रार्थना र सु–समाचारको शक्ति हो कि इसाईहरूले निरंकुशताको फलामलाई जवाफ दिन आवश्यक छ । यो सु–समाचार हो जसले मानिसहरूलाई स्वतन्त्रता दिन्छ । स्वतन्त्रता यति खतरनाक छ कि यसले सीसीपीको भविष्यको अस्तित्वलाई चुनौती दिन्छ । (डा.डेभिड ल्यान्ड्रम ओपन डोर्स युके र आयरल्याण्डका वकालत गर्ने निर्देशक हुन् । यो आलेख क्रिस्चियन टुडेमा प्रकाशित भई भावानुवाद गरिएको हो)
‘मधेसी मोर्चाको अरू थप कुकृत्य र विभत्स अवसरवादी चरित्र आउन बाँकी नै छ’
जय प्रकाश गुप्ता : त्यस बेलाको मधेसी मोर्चा । महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र